Thola Usizo - BullyingCanada
/ Thola Usizo
Call BullyingCanada Manje
Ithimba lethu lamavolontiya angaphezu kuka-350 aqeqeshwe kakhulu lilapha ukuze lisize abantu abafana nawe. Vele uthathe ifoni yakho bese udayela:
futhi ulandele imiyalo yokufinyelela Ithimba Lokusekela!
Ungabi namahloni, sikhona ngenxa yakho.
Kuvamile ngempela ukuba nelukuluku lokwazi ngamasevisi ethu, kodwa sicela ukhumbule ukuthi sidinga ukwenza isiqiniseko sokuthi siyatholakala ukuze sisize labo abadinga usizo.
Awuqinisekile ukuthi uzothini? Ungakhathazeki! I-Virtual Buddies yethu inobungane futhi iqeqeshwe kahle—bazokwenza ingxoxo iqhubeke nemibuzo embalwa.
Uncamela Ukuthumela Umbhalo Noma I-imeyili?
Sithumelele umyalezo noma nini! Vele uthumele umlayezo we-SMS ku:
noma ungathumela i-imeyili Ithimba lethu Lokusekela 24/7/365 kokuthi:
Izingane eziningi zinombono omuhle wokuthi kuyini ukuxhashazwa ngoba zikubona nsuku zonke! Ubuxhwanguxhwangu kwenzeka lapho othile elimaza noma esabisa omunye umuntu ngamabomu futhi lowo ohlukunyezwayo kuba nzima ukuzivikela. Ngakho-ke, wonke umuntu udinga ukuzibandakanya ukuze asize ukukumisa.
Ubuxhwanguxhwangu abulungile! Ukuziphatha okwenza umuntu oxhashazwayo azizwe esaba noma engakhululekile. Ziningi izindlela abantu abasha abahlukumezana ngazo, ngisho noma bengaqapheli ngaleso sikhathi.
Ezinye zazo zifaka:
Ukushaya, ukusunduza nezinye izenzo ezilimaza abantu ngokomzimba
Ukusabalalisa amahlebezi amabi ngabantu
Ukugcina abantu abathile ngaphandle kweqembu
Ukugcona abantu ngendlela engafanele
Ukwenza abantu abathile "bagebengu" kwabanye
Yiziphi izinhlobo ezivamile zokuxhashazwa?
Ubuxhwanguxhwangu ngamazwi - ukuthuka, ukubhuqa, ukugcona, ukusabalalisa amahlebezi, ukusongela, ukubhekisa kabi isiko lomuntu, ubuhlanga, ubuhlanga, inkolo, ubulili, noma ukukhetha komuntu ucansi, ukuphawula kocansi okungafunwa.
Ubuxhwanguxhwangu bomphakathi - ukuxukuza, ukweba, ukukhipha abanye eqenjini, ukululaza abanye ngezandla zomphakathi noma imidwebo ehloselwe ukubeka abanye phansi.
Ubuxhwanguxhwangu bomzimba - ukushaya, ukupopa, ukumpintsha, ukujaha, ukusunduza, ukuphoqa, ukucekela phansi noma ukweba izinto, ukuthintwa ngokocansi okungafunwa.
Ubuxhwanguxhwangu be-Cyber ​​- ukusebenzisa i-inthanethi noma imiyalezo ukuze kusabise, ukubeke phansi, ukusabalalisa amahlebezi noma ukuhlekisa ngomunye umuntu.
Yimiphi eminye yemiphumela emibi yokuxhashazwa?
Ubuxhwanguxhwangu bubacasula abantu. Kungenza izingane zizizwe zinesizungu, zingajabule futhi zethukile. Kungenza bazizwe bengaphephile futhi bacabange ukuthi kufanele kube khona okungalungile ngabo. Izingane zingalahlekelwa ukuzethemba futhi zingase zingasafuni ukuya esikoleni. Kungase ngisho bagule.
Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuhlukunyezwa kuyingxenye yokukhula kanye nendlela yokuthi abantu abasha bafunde ukunamathela ngokwabo. Kodwa ukuxhashazwa kungase kube nemiphumela yesikhathi eside ngokomzimba nangokwengqondo. Ezinye zazo zihlanganisa:
Ukuhoxa emisebenzini yomndeni neyesikole, ufuna ukusala wedwa.
Uma ubuxhwanguxhwangu bunganqandwa, bulimaza nababukele, kanjalo nomuntu ohlukumeza abanye. Ababukele besaba ukuthi bangaba isisulu esilandelayo. Ngisho noma bemphatha kabi lowo oxhashazwayo, bayakugwema ukuhileleka ukuze bazivikele noma ngenxa yokuthi abaqiniseki ukuthi benzeni.
Izingane ezifunda ukuthi zingakwazi ukubalekela ubudlova nobudlova ziyaqhubeka zenza kanjalo nalapho sezikhulile. Banethuba eliphezulu lokuzibandakanya ezenzweni zokuthandana, ukuhlukunyezwa ngokocansi, nokuziphatha kobugebengu kamuva ekuphileni.
Ukuxhashazwa kungaba nomthelela ekufundeni
Ukucindezeleka nokukhathazeka okubangelwa ubuxhwanguxhwangu nokuhlukunyezwa kungenza kube nzima ngezingane ukufunda. Kungabangela ubunzima ekugxiliseni ingqondo futhi kunciphise ikhono labo lokugxila, okuthinta ikhono labo lokukhumbula izinto abazifundile.
Ukuxhashazwa kungase kubangele ukukhathazeka okukhulu
Ukuxhashazwa kubuhlungu futhi kuyalulaza, futhi izingane ezixhashazwayo zizizwa zihlazekile, zishaywa futhi zihlazekile. Uma ubuhlungu bungadambi, ubuxhwanguxhwangu bungase buholele ekucabangeleni ukuzibulala noma ukuziphatha okunobudlova.
Kuvame kangakanani ukuxhashazwa?
ECanada, okungenani umfundi oyedwa kwabathathu uye wabika ukuthi uyaxhashazwa. Cishe ingxenye yabazali baseCanada baye babika ukuthi banengane eyisisulu sokuxhashazwa. Ucwaningo luthole ukuthi ukuhlukumeza kwenzeka kanye njalo emizuzwini eyisikhombisa enkundleni yokudlala kanye njalo emizuzwini engama-1 ekilasini.
Ezimweni eziningi, ubuxhwanguxhwangu buyaphela phakathi nemizuzwana eyi-10 lapho ontanga bengenela, noma bengahambisani nokuziphatha kobuxhwanguxhwangu.
Ngingenzani njengamanje mayelana nobuxhwanguxhwangu emphakathini wakithi?
Okokuqala, khumbula ukuthi silapha ngenxa yakho 24/7/365. Xoxa nathi bukhoma, usithumelele i imeyili, noma usinike indandatho ku-1-877-352-4497.
Sesikushilo lokho, nazi izenzo ezimbalwa ezibambekayo ongazithatha:
Tshela othile omethembayo - uthisha, umqeqeshi, umeluleki oqondisayo, umzali
Isho okuthile okuncoma isiqhwaga ukuze usiphazamise
Hlalani ngamaqembu ukuze nigweme ukungqubuzana
Sebenzisa amahlaya ukuze ulahle noma uxhumane nesixhwanguxhwangu sakho
Yenza sengathi isiqhwaga asikuthinti
Hlala uzikhumbuza ukuthi ungumuntu olungile futhi ofanelwe ukuhlonishwa
Esikhundleni sokuziba isigameko sokuhlukumeza, zama:
Tshela uthisha, umqeqeshi noma umeluleki
Hamba uye ngakulowo ohlukunyeziwe
Sebenzisa izwi lakho - ithi "yeka"
Yiba umngane isisulu
Hola isisulu kude nesimo
Khuluma nothisha noma umeluleki
Cabanga ukuthi ungazizwa kanjani uma othile ekuhlukumeza
Cabangela imizwa yesisulu sakho - cabanga ngaphambi kokuba wenze
Yiziphi izibalo ezibalulekile okufanele uzazi mayelana nobuxhwanguxhwangu?
I-Canada inezinga lesi-9 eliphezulu kakhulu lokuhlukumeza esigabeni sabaneminyaka engu-13 esikalini samazwe angu-35. 
Okungenani umfundi oyedwa kwabathathu osemusha eCanada ubike ukuthi uxhashazwe muva nje. 
Kubantu abadala baseCanada, u-38% wabesilisa kanye no-30% wabesifazane babike ukuthi bake babhekana nokuxhashazwa ngezikhathi ezithile noma njalo phakathi neminyaka yabo yesikole. 
U-47% wabazali baseCanada babika ukuthi banengane eyisisulu sokuxhashazwa. 
Noma yikuphi ukuhlanganyela ekuqineni kwandisa ingcuphe yemibono yokuzibulala entsheni. 
Izinga lokucwaswa okutholwa abafundi abahlonza njengeLesbian, Gay, Bisexual, Trans-identified, Two-Spirited, Queer or Questioning (LGBTQ) liphakeme ngokuphindwe kathathu kunentsha ethanda ubulili obuhlukile. 
Amantombazane avame ukuxhashazwa kuyi-Internet kunabafana. 
U-7% wabasebenzisi be-inthanethi abadala e-Canada, abaneminyaka engu-18 nangaphezulu, bazibika ukuthi baba yisisulu sokuxhashazwa nge-inthanethi esikhathini esithile empilweni yabo. 
Indlela ejwayeleke kakhulu yobuxhwanguxhwangu be-inthanethi ibandakanya ukuthola ama-imeyili asongelayo noma anolaka noma imilayezo esheshayo, ebikwe yizisulu ezingama-73%. 
U-40% wabasebenzi base-Canada ubhekana nokuxhashazwa masonto onke. 
UMkhandlu WaseCanada Wokufunda - Ubuxhwanguxhwangu eCanada: Ukuthi ukusabisa kukuthinta kanjani ukufunda
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., kanye neQembu Lokubhala Lobuxhwanguxhwangu be-HBSC. Amathrendi wesikhathi esiphambanayo kuzwelonke ekuziphatheni kobuxhwanguxhwangu 1994-2006: okutholakele okuvela eYurophu naseNyakatho Melika. Ijenali Yamazwe Ngamazwe Yezempilo Yomphakathi. 2009, 54 (S2): 225-234
UKim YS, kanye ne-leventhal B. Bullying and Suicide. Isibuyekezo. Ijenali Yamazwe Ngamazwe Yemithi Yentsha Nezempilo. 2008, 20 (2): 133-154
I-Alberta Yamahhala Yezixhwanguxhwangu - Ubuxhwanguxhwangu Bokucwasa Abantu Abafana Nabo
I-Statistics Canada - Ubuxhwanguxhwangu be-Cyber ​​kanye nokuyenga izingane nentsha
I-Statistics Canada - Ukuhlukunyezwa kwe-inthanethi okuzibike ngokwakho eCanada
U-Lee RT, kanye no-Brotheridge CM “Lapho inyamazane iphenduka inyamazane: Ubuxhwanguxhwangu emsebenzini njengesibikezelo sokuphikisa / ubuxhwanguxhwangu, ukubhekana nesimo, kanye nokuphila kahle”. I-European Journal of Work and Organizational Psychology. 2006, 00 (0): 1-26
Yiziphi ezinye izinganekwane ezivamile mayelana nobuxhwanguxhwangu?
Inganekwane #1 - "Izingane kufanele zifunde ukuzimela."
Iqiniso - Izingane eziqunga isibindi zikhononde ngokuxhashazwa zithi sezizamile futhi azikwazi ukumelana nesimo zizodwa. Phatha izikhalo zabo njengocingo lokuthola usizo. Ngaphezu kokunikeza ukusekelwa, kungaba usizo ukunikeza izingane ukuqeqeshwa kokuxazulula izinkinga nokuqina ukuze kuzisize ekubhekaneni nezimo ezinzima.
Inganekwane #2 - "Izingane kufanele zibuyisele emuva - kakhulu kuphela."
Iqiniso - Lokhu kungadala umonakalo omkhulu. Abantu abaqinela abanye bavame ukuba bakhulu futhi babe namandla kunezisulu zabo. Lokhu kunikeza izingane umqondo wokuthi udlame luyindlela esemthethweni yokuxazulula izinkinga. Izingane zifunda ukuhlukumeza ngokubuka abantu abadala besebenzisa amandla abo ukuze babe nolaka. Abantu abadala banethuba lokubeka isibonelo esihle ngokufundisa izingane indlela yokuxazulula izinkinga ngokusebenzisa amandla azo ngendlela efanele.
Inganekwane #3 - "Yakha umlingiswa."
Iqiniso - Izingane ezixhashazwa ngokuphindaphindiwe, ezizethembayo futhi azibethembi abanye. Ubuqhwaga bulimaza indlela umuntu azibheka ngayo.
Inganekwane #4 - "Izinduku namatshe kungaphula amathambo akho kodwa amagama awasoze akulimaza."
Okungokoqobo - Izibazi ezishiywe ukubizwa ngamagama zingahlala impilo yonke.
Inganekwane #5 – “Lokho akukona ubuxhwanguxhwangu. Bayadlala nje.”
Iqiniso - Ukugcona okunonya kulimaza futhi kufanele kuyekwe.
Inganekwane #6 - "Bekulokhu kuneziqhwaga futhi zizohlala zikhona."
Iqiniso - Ngokusebenzisana njengabazali, othisha nabafundi sinamandla okuguqula izinto nokudala ikusasa elingcono lezingane zethu. Njengongoti ohamba phambili, uShelley Hymel, uthi, “Kudinga isizwe sonke ukushintsha isiko”. Asisebenzisane ukuze siguqule isimo sengqondo mayelana nobuxhwanguxhwangu. Phela ubuxhwanguxhwangu akuyona indaba yokuziphatha - yisikhathi sokufundisa.
Inganekwane #7 - "Izingane zizoba izingane."
Iqiniso - Ubuxhwanguxhwangu wukuziphatha okufundiwe. Kungenzeka ukuthi izingane zilingisa ukuziphatha okunonya eziye zakubona kuthelevishini, kumabhayisikobho noma ekhaya. Ucwaningo lukhombisa ukuthi u-93% wemidlalo yevidiyo uklomelisa ukuziphatha okunodlame. Okutholakele okwengeziwe kubonisa ukuthi u-25% wabafana abaneminyaka engu-12 kuya ku-17 bavame ukuvakashela amasayithi e-inthanethi ayingozi futhi anenzondo, kodwa amakilasi okufunda nokubhala kwemidiya anciphisa ukubuka kwabafana udlame, kanye nezenzo zabo zobudlova enkundleni yokudlala. Kubalulekile ukuthi abantu abadala baxoxe ngodlame kwabezindaba nentsha, ukuze ifunde ukuthi ingalugcina kanjani esimweni. Kunesidingo sokugxila ekushintsheni izimo zengqondo ngobudlova.
Source: Uhulumeni wase-Alberta
Uma unentshisekelo yokuzithandela nge BullyingCanada, ungafunda okwengeziwe kwethi Ahileleke futhi Yiba Ivolontiya amakhasi.
Sihlala sifuna abantu abanomdlandla, abagqugquzelekile, nabazinikele ukuze basisize sinqande intsha esengozini yokuxhashazwa.